Izindaba - Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali ziqala ukwanda kwentengo entsha!
Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali ziqala ukwanda kwentengo!
Izinto Zokusetshenziswa Kwamakhemikhali Zisetha Ukunyuka Okusha Kwezintengo!
Izinto zokuhluza eziningi zivaliwe! Uwoyela ongahluziwe wakhuphuka futhi washaya phezulu cishe ezinyangeni ezicishe zibe ngu-13!
Njengoba isimo sezulu esibandayo sidlulela eningizimu yeTexas, iTexas yonke ingasebenzisa kuphela ukunqamuka kwamandla kagesi ukunciphisa amandla okufunwa kwamandla nokugwema ukunqamuka kukagesi okuyinhlekelele unomphela. Ukuphela kukagesi omkhulu nokulahlwa kwezihlahla kuholele ekuvalweni okukhulu kokukhiqizwa kukawoyela kanye nezinto zokuhluza.
IMotiva Enterprises, okuyindawo ehluza uwoyela enkulu kunazo zonke eNyakatho Melika, ithe izovala indawo yayo yokuhluza uwoyela ePort Arthur eTexas ngenxa yesimo sezulu esibi kakhulu.
I-DRM Phillips Chemical Company ibike ukuthi ngenxa yesimo sezulu esibandayo esibi esitshalweni iPasadena eTexas, inkampani izolungiselela ukuvala imishini.
U-Onkyo uveze ukuthi ipayipi likawoyela ongahluziwe ku-Line 59 livaliwe ngemuva kokunqamuka kukagesi.
ISotioti Aramco iMotiva Enterprises LLC nayo izomisa ukusebenza kokuhlanzwa kwayo uwoyela ePort Arthur, eTexas.
Indawo yokuhluza iMarathon Oil Corporation eGalveston Bay eningizimu neHouston nayo ivaliwe okwesikhashana ngenxa yezinkinga zezulu.
Ngokombiko weStandard & Poor's Global Platts ngokuhamba kwesikhathi ngoLwesibili, ukunqamuka kukagesi kudale ukuthi izindawo eziningi zokuhluza eTexas zivale noma zinciphise ukusebenza. Okungenani imiphongolo eyizigidi ezi-2.6 iqinisekiswe ukuthi ivalwe ngokuphelele, kanye nemiphongolo ebalelwa ezigidini ezingama-5.9 zesimo samandla okuhluza. Ngasikhathi sinye, lo mbiko uthe amazinga okushisa abandayo anciphise ne-oyela ongahluziwe wase-US kanye negesi yemvelo.
Ngenxa yokubanda okukhulu eningizimu, izigidi zemiphongolo yamandla okucwenga uwoyela zamiswa okwesikhashana, futhi intengo kawoyela ongahluziwe yaqhubeka nokukhuphuka. Uwoyela ongahluziwe weqe ama- $ 60, ukuvuselelwa kwezinga eliphakeme kakhulu kusukela ngoJanuwari 8 nyakenye.
Imidondoshiya ngokubambisana ilibele ukulethwa! Kuze kube yizinsuku eziyi-180!
Kusukela ubhadane lweNovel Coronavirus, imidondoshiya yamakhemikhali aphesheya kwezilwandle ibesenkingeni phakathi kokukhiqizwa nokuthengiswa. Izinto zokusetshenziswa ziyashoda futhi ezokuthutha ziyavalwa, okwenza izinkampani zamakhemikhali aphesheya kwezilwandle kufanele zinciphise izindleko zokukhiqiza. Njengoba umthelela uqhubeka, ukushoda okukhulu emakethe yamakhemikhali kuye kwanda. Ngokuya ngempendulo yemakethe,izinkampani eziningi ezihamba phambili zamakhemikhali zimemezele ukuphoqa amandla kanye nokubambezeleka kokulethwa!
Imakethe iphelelwe yisikhathi, futhi iningi lazo
abakhiqizi bathumela intengo ekhuphuka futhi!
Abenzi abashiwo abanweba isikhathi sokulethwa ngabaholi bemboni. Ukushoda okukhulu kwezimpahla emakethe kungaphezu komcabango wawo wonke umuntu. Ngaphansi komthelela wokushoda okuhlukahlukene nokuphelelwa yisikhathi, izingcaphuno zemakethe zezinto ezisetshenzisiwe zamakhemikhali azisebenzi ngomzuzwana owodwa, futhi izingcaphuno zombuzo ngamunye zikhuphuke kakhulu, futhi amanani entengo akhuphukayo avela kubakhiqizi abakhulu athunyelwe futhi!
Ukubambezeleka kokulethwa komhlaba, khathazeka ngokukhuphula imakethe yamakhemikhali!
Ukukhiqizwa kwezinkampani ezihamba phambili zamakhemikhali kwehlise ijubane futhi ukubambezeleka kokulethwa kwezidingo kukhulise ukukhathazeka kwemakethe mayelana nokushoda, futhi imakethe yamakhemikhali iqhubekile nokukhuphuka. Ngokusho kweGuanghua Trading Monitoring, kunezinhlobo ezingama-41 zamakhemikhali amaningi aqhamuke ngesonto eledlule (2.15-2.19), kwawa izinhlobo ezi-6 kuphela zamakhemikhali amaningi. Phakathi kwabo, izinzuzo ezintathu eziphezulu zazikhona i-styrene (21.53%), isooctyl alcohol (18.48%), ne-hydrogenated benzene (15.81%).
Ngokubheka isimo samanje semakethe, amafektri angaphandle avale kakhulu futhi isimo sokuphakelwa okunzima kunzima ukusinciphisa. Uwoyela ongahluziwe emhlabeni wonke uyaqhubeka nokukhuphuka. Kulindeleke ukuthi i-imakethe yamakhemikhali izoqhubeka nokukhuphuka kwikota yokuqala.